Suxufinnimadu Geddaa Maaha! | Salaan Media
Suxufinnimadu Geddaa Maaha!
W/Q |Eng. Hussein Adan Igeh |Hussein Deyr |UK|
1. Tilmaamaha Suxufiga
Suxufinimadu waa Aqoon, Xirfad iyo Mihnad la barto oo iskuullo iyo Jaamacado loo galo. Maaha wax inta bebeenkii lagu riyoodo subaxdiina lagu shaqo tago. Suxufigu inta aanu dhex iman bulshada uu rabo inuu u adeego, waxa marka hore la layliyaa oo la carbiyaa shakhsiyaddiisa iyo qaabka fikirkiisa. Waxaa la baraa oo laga dhaadhiciyaa xeerarka iyo shuruucda ay Saxaafadda Xorta ahi leedahay iyo sifaha ama tilmaamaha looga baahan yahay inuu la yimaado Suxufigu.
Suxufigu waa kii xog-maal ah xaqiiqada raadiya ee u dhow, kala saara dhabta iyo dhalanteedka ilo-wareedyada uu soo xiganayo. Suxufiga ku gaashaaman aqoonta suxufinimo waa ka ay doodihiisa ka muuqdaan xushmad iyo qadarin uu u hayo ciddii dani ka gasho amaba ay dood-wadaag leeyihiin, isla markaana leh hal-adaygnimo iyo dhiirranaan uu fikirkiisa ku meel marsan karo isagoo kaashanay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay.
Suxufiga ay caqliga iyo aqoontu hagaan waa kii dhexdhexaad ah ee ka feyow caadifadda, qabyaaladda, nacaybka shakhsiyadeed, gobolaysi, iwm. Waa kii garan kara ee miisaami kara muhimadda iyo miisaanka ay leedahay shaqada Suxufininmadu isla markaana qiyaasi kara saamaynta ay qoraallada iyo wararka uu soo gudbinayaa ku yeelan karaan bulshada uu u adeegayo.
Suxufiga ay caqliga iyo aqoontu hagaan waa kii kala saara saxa iyo qaladka, ka garaaba wixii xaqa ah, diida xumaanta, xaqdarrada iyo dulmiga, ka xishooda wixii magaciisa, ka dalkiisa iyo bulshadiisaba dheg xumo u soo jiidi kara. Suxufiga dhabta ahi waa kii leh aragti dheer iyo ifa-faale durugsan oo uu kaga sii saadaalin karo isbedellada dhaqan-dhaqaale, siyaasadeed, nabadgelyo iyo kuwo bulsho ee ka dhici kara guud ahaan dunida, gaar ahaana kuwa ka dhici kara gobolka iyo qaaradda uu ku noolyahay.
2. Hab-dhaqanka Qallafsan ee Qaybo ka tirsan bahda Saxaafadda:
Waxa beryahan dambe saxaafadda iyo goleyaasha lagu gorfeeyo siyaasaddda iyo arrimaha bulshada ee Jam. Somaliland ku soo badanayey Shakhsiyaad iyo Xarumo Warbaahineed (TV, Shabakado iyo Wargeysyo) oo ku abtirsada Jam. Somaliland, kuwaasoo iyagu gebi ahaanba si qaldan u fahmay Muhimadda, Macnaha, Mihnadda, Milgaha iyo hab-dhaqanka Suxufiga iyo Saxaafadda Xorta ah. Shakhsiyaadkan iyo Xarumahan Warbaahineed waxay u dhaqmaan si gef iyo meel ka dhacba ku ah garashada suuban iyo caqliga feyow ee Suxufiga iyo Saxaafadda Xorta ah looga baahan yahay. Halkii ay bulshada uga soo gudbin lahaayeen warar dhex-dhexaad ah, hufan, caadifadduna ka maqantahay, isla markaana si asluub leh farta ugu fiiqi lahaayeen wixii qalad, hagrasho ama caddaalad darro ah ee ay Xukuumadda ku tallaabsato, waxay doorbidaan oo ay bulshada u soo gudbiyaan warar been ah oo xaqiiqada ka fog oo kicin iyo xaalad abuur ah oo ay bulshada iskaga horkeenayaan.
Hab-dhaqanka qallafsan ee qaybo ka tirsan bahda Warbaahinta reer Somaliland, aqoon la’aanta baahsan ee ka muuqata iyo dareenka wadaninnimo ee ka sii suulaya, waxaabad mooddaa in cadawga Jam. Somaliland aanu u baahnayn inuu sir-doon iyo basaasiin u soo dirto Somaliland, waayo iyagaaba (Saxaafadda Xag-jirka ah) hawlahaa si fiican ugu qabta, oo si dadban iyo si toos ahba u gudbiya una fashiliya sir iyo xog kasta oo ay leeyihiin Qaranka iyo Qoomiyadda Jam. Somaliland. Waxay baahiyaan nooc kasta oo xog ah oo uu Qaranku leeyahay; laga bilaabo dhaq-dhaqaaqa, dhaawacyada iyo dhimashada ciidamada Qaranka, xogta dhaqaale iyo diblomaasiyadeed illaa xogta ka dhex jirta Qasriga Madaxtooyada!!!!
Cayda, Cambaaraynta, Ceebaynta, af-lagaadada iyo nacaybka shaqsiyadeed ee dadka noocan ahi- (iyaga oo ku dhuumanaya magaca Xorriyadda Saxaafadda)- ay kula kacayaan Masuuliyiin sare oo Sharaf leh oo Xil-Qaran ummadda u haya waxay gef, ceeb iyo maangadba ku tahay dadweynaha ama akhristayaasha ay leeyihiin waanu u adeegnaa. Waxaa cad inay u diga-rogteen AALAD uu cadowgu u adeegsado burburinta ummaddan xariirta ah. Bulsho weynta samaha iyo wanaagaba jecel ee Jam. Somaliland si weyn ayay ula socdaan ugana dheregsan yihiin ujeedooyinka iyo ajendaha fog ee ay leeyihiin Shakhsiyaadkan iyo Xarumahan Warbaahineed ee iyagu ku bahoobay xumaha, wararka pro-bagandaha, xaalad abuurka iyo iska-horkeenka bulshada Somaliland.
Haddaba su’aasha in la isweydiiyo mudani waxa weeye: Dadka iyagu leh habdhaqanka noocan ah, ma u qalmaan inay adeegsadaan magacyada sida: Suxufi, Weriye, Tifatire… iyadoo ay si cad u muuqato inay aqoontii, agabkii, akhlaaqdii iyo garaadkii laga rabay mihnadda Suxufinnimada ay si weyn uga arradan yihiin??!!
Waxay ila tahay in shakhsiyaadkan oo kale iyo Xarumaha-Warbaahineed ee ay maamulaan aanay kaalini uga bannaanayn Bahda Saxaafadda Xorta ah, kol haddii ay ka maqantahay aqoontii iyo xil-kasnimadii Suxufinnimo ee hagi lahaa si ay u kala gartaan Saxa iyo Khaladka, Xumaha iyo Samaha.
Kol haddii wanaaga iyo horumarka dalka iyo dadkaba u soo kordhaa uu iyaqa (Saxaafadda Xag-jirka ah) uga dhigan yahay dib u dhac iyo guul-darro, Kol haddii wixii ummadda Somaliland oo dhammi saxa ay u arkaan ay iyaga qalad ula muuqato, Kol haddii wixii ummadda Somaliland oo dhammi ay ku farxaan ay iyagu ka naxayaan , Kol haddii wixii ummadda Somaliland oo dhammi dan u aragto ayna iyaga ahayn dantooda. Waxaan aaminsanahay in shakhsiyaadkan oo kale aanay u qalmin inay magac iyo hayb midnaba la wadaagaan ummaddeena iyo dalkeenna muqadaska ah. Waana gef iyo meel ka dhac weyn inay isku-magacaabaan Saxaafad ‘Madaxbannaan’ oo reer Somaliland ah.
Guul iyo Horumar Bulshada Xariirta ah ee Jam. Somaliland
W/Q: |Eng. Hussein Adan Igeh |Hussein Deyr |UK|